Inkinga enkulu, Ukuphendula, Isixazululo sichaza: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-14 Juni 2019	• 6 Amazwana
Ngivame ukukhuluma nge-maxim Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo. Eminyakeni yamuva siye sabona amacala okubulala nokuningi nakwamanye amaphephandaba lapho kufanele kucatshangelwe ukuthi lokhu kungukusebenza kwengqondo (PsyOps) ukudlala kubantu. Ezihlokweni eziningana ngichazile indlela umdlalo Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo isebenza nokuthi lokhu kungenzeka ukuthi kusetshenziswe kanjani emacaleni okubulala awaziwayo ezikhathini zamuva. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ngikukhuthaza kakhulu lesi sihloko en lesi sihloko kuhle ukufunda futhi ngaphambi kokuqhubeka lapha. Kuyafaneleka ngempela ukutadisha ngokucophelela izihloko zombili namavidiyo abekwe kuwo.
Yonke le micimbi kanye nokusetshenziswa kobuqili nokukhohliswa kwabezindaba, ukwenza abantu abe yindlela yokumamukela yemithetho eqinile nemigomo yesimo sombuso, bangiphefumulela ukwenza ingoma yayo. Ungathola (igumbi lokuphumula) ukurekhoda okuzwakalayo kuvidiyo ngezansi.
Ukubusa Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo kuchaza kakhulu ukuthi ohulumeni, ngokubambisana nabezindaba, babhekisela kubantu inkinga enkulu. Ngokujwayelekile da yinkinga eyenziwe yedwa; idalwe ngamasu we-studio ye-studio njengeteknoloji ye-greenscreen, i-deepfakes, ukufana kabusha kobuciko nesofthiwe yokushintshanisa ubuso. Uma uchofoza ezihlokweni ezixhunywe ngenhla, uzothola incazelo eningiliziwe yalezo zindlela.
Izixuku zithatha izinto ezivusa kakhulu imizwelo yegundane kanye nemithombo yezindaba kusiza ukuvusa ukusabela komzwelo phakathi kwabantu. Amasu okujula asetshenziselwa ukuqapha imithombo yezokuxhumana. Ngamakhulu abasebenzi basekhaya abaqapha ingxoxo ngokugcwele futhi befihle ngemuva kokuthenjelwa kufaka imininingwane ngokufaka inethiwekhi yezenhlalo ezithembekile, ungaqondisa noma iyiphi inkulumo engxenyeni ye-intanethi bese uhlasela noma ubani onombono ohlukile. Ukusabela phakathi kwabantu kungacasulwa, kepha kungenziwa futhi. Ngenxa yokuthi uthumele ukuzwa phakathi kwabantu ngokusebenzisa imidiya nokuqapha imidiya yezenhlalo ngokusebenzisa ibutho le-troll, ubese ulungiselela abantu imithetho emisha ababengeke bayamukele ngaphandle kwenkinga eyakhelwe yona (i-PsyOp).
Ngangifuna ukucula ingoma okwesikhashana, ngoba umculo uvame ukuhlala kangcono kunezihloko. Ungathola ukuthi kuyasiza noma uzoyisebenzisa uma uzama ukukhombisa abantu ukuthi sidlala kanjani ngezindaba ezimbi cishe nsuku zonke.
Ungakwazi ukuletha ushintsho kanye nokukhetha kwakho indaba!
UPeter M. (ovela kulolo dade othembekile kuya kuJeroren Pauw) uphinde waboshwa
Amathegi: faka, deepfakes, ubuso, ubheke, ubuso, afakiwe, ingoma, izindaba ezikhohlisayo, ukusebenza, inkinga, kwengqondo, psyop, ukuphendula, ukufana kabusha, isofthiwe, isixazululo, ingoma, maxim, eguqulayo, kuchaziwe, ividiyo
14 Juni 2019 ku-08: 04
Uma ngifunda izimpendulo ku-nu.nl bese isixazululo singumthetho 💉😉
Ngomuntu siqu, ngicabanga ukuthi i-7 ku-10 ayikholelwa ngempela i-bullshit yesikhashana.
14 Juni 2019 ku-14: 14
Lmfao nu.nl ... leyo yinkampani elawulwayo yezindaba ... Iminyaka engu-10 eyedlule yaveza ukuthi kuyiqiniso, manje kuyi-Aids ehlanzekile. NjengoT TPO ngesikhathi esithize, izikhumbuzo zithola ngoba zikhuluma kahle ngoba zihlukumeza kakhulu futhi zikhulekela izilwane zasendle. Yingakho manje sebehlaziya ukuphawula futhi ungaphendula kuphela uma uyilungu ngokusebenzisa iminikelo.
Uyi-cuck kanzima uma ugijima ngemuva kwezindaba nezombangazwe, uhlobo lomsindisi oluyinkimbinkimbi elinde umsindisi. Unabantu abano-70 abaneminyaka engu-18 ubudala abane-Stockholm Syndrome abaye bakholelwa ngokukhokhisa konke ukuphila kwabo bonke. Ngeke kube yilapho i-7 / 10 efuna ukugonywa okuphoqelekile .. Ngicabanga ukuthi abantu banomgomo wokugoma (okwamanje uyisiphukuphuku) kodwa akudingeki.
Kufanele nakanjani ungalindeli ukuthi umuntu axazulule izinkinga kuwe ... vele uqinisekise ukuthi izikhalazo ezihlala njalo zidalwe phezu kokuthi ngisho nabantu abakhulu abakwazi ukulawula. Vele uqhubeke ne-agenda ye-chaos eyenziwe yi-elite iminyaka
Isigqila somholo wabhala:
14 Juni 2019 ku-11: 03
Kulungile ... i-damn it ...
Manje nginomculo ekhanda lami usuku lonke!
Ngakho-ke ... abantu abasebenzela umphathi wezandla, isibonelo:
Ikakhulukazi ungalilaleli umculo, ngoba ungase uhlabelele ngomsindo usuku lonke, ukuze ozakwabo bangakwazi ukugxila emsebenzini wabo ukuze balondoloze uhlelo! Cabanga ...
14 Juni 2019 ku-12: 00
Baudet: ukuyeka ukufuduka kwabantu nokungaboni ngaso sonke isikhathi Kungabe kukwazi ukuvikela nge-talmudic keppeltje e-israel ... i-israel ethumela abafuduki e-europe. I-Lmfao ... nayo iphikisana ne-EU ku-fvd bese iqhaza ePhalamende le-EU. Yeka ihlaya.
14 Juni 2019 ku-16: 42
Endaweni yami ngizwa ukusabela okuxubile kumculo kaMartin; kusuka okuhle kakhulu kuya kokubi.
Ngokwemibono yami futhi ukunambitheka ukucula kuyinto encane, kodwa ngicabanga ukuthi igitala lihle kakhulu!
Ngesinye isikhathi, le ngoma ayiyona into eyenziwe e-studio ehlome kahle, lapho ubuchwepheshe benza konke okusemandleni ukwenza konke umsindo kube ngcono. Ngaphezu kwalokho, uMartin akasebenzi ngokuthengisa, kodwa unomsebenzi owodwa: ukukhombisa abantu ukuthi bahlala ejele elingabonakali, kuyilapho bona ngokwabo basiza ukugcina ngisho nokwandisa leli jele.
Kodwa kubaluleke ngani ukuthi ngicabanga ngoma ingoma? UMartin ubelokhu edala futhi echaza futhi uye waze waze wafaka umphumela kwi-intanethi. Abantu abaningi bakwenza lokhu ngokwabo, kodwa uMartin ubukwa ibutho elikhulu le-troll, elisebenzisa wonke amathuba ukumhleka usulu ngenhloso yokuthulisa.
Lapho ngibheka nxazonke, ngibona abantu abambalwa abaqaphele ukuba babe abahlakaniphile futhi bavelele. Izixuku ziziphatha "njengoba kufanele". Ngaphezu kwalokho, ngokuhamba kwesikhathi, uhlelo luyanqabela abantu ithuba lokudala nokuveza ubuciko babo. Ukuziphatha okufiselekayo emphakathini kuxhomeke esimweni lapho umuntu ethola khona. Kodwa-ke, konke lokhu okubizwa ngokuthi ukuziphatha okufiselekayo emphakathini kungumphumela wokumiswa nokufundiswa, okuxhomeke emoyeni wesikhathi nesimo. Ubuqili ukubona ukuthi lesi simo sesikhathi nesikhathi samasiko, ngokuziphatha okufunayo, kulawulwa ngokugcwele yibabusi bamanje, abalawula ngasese uhlelo lonke emhlabeni wonke. Umthetho futhi uqinisekisa ukuthi ukunemba kokubikezela ukuziphatha okufisayo kwesisindo kuyanda, ukuze ubukhulu bungalawulwe kangcono.
Abantu abaphila "njengoba kufanele" bangaboni ukuthi baphila ngokugcwele ngendlela ababusi abafuna ngayo. Laba bantu bezimvu ezinhle noma izinhlanzi ezifile ezihamba nokugeleza. Lezi zinhlanzi ezifile ngeke zivele noma zingenzi lutho olungalungile, ngoba ziyiZombies eziphilayo, ezilawulwa ngokuphelele uhlelo. Izinhlanzi ezifile, eziphakeme, ziye zakwazi ukukhahlela uhlelo futhi zivame ukugijima ezitsheni noma izikhwama, yizinhlanzi ezifile kunazo zonke ezibolile. Lezi zinhlanzi zibambisana lapho zikopela izinto ngokuhaha noma ezinye izinhloso ezizimele. Ngaphezu kwalokho, labo abasemandleni ngeke baphonsa la makollar amhlophe, ngoba la makoloni amhlophe ayimfuneko yokukwazi ukulawula abantu ngokusebenzisa imithetho nemithetho. Isendlalelo esiphezulu ngaphansi, njengabaxhasi nabanye abahlinzeki bezinsizakalo, ngokuvamile abaqapheli ukuthi yikuphi (okukhudlwana) ajenda abakhonzayo.
Uzobona abantu abambalwa nabambalwa abaqaphele ukuveza ubunikazi babo beqiniso (njengokuthi bayitholile). Ummeli ovela ehhovisi elihlonishwayo ngeke abeke ividiyo enjalo kwi-intanethi ngokushesha ... ngemuva kwalokho, lokho akulungile. Izinhlanzi ezifile zalolu hlobo zinezwe eliyinyumba elidalwa yi-ego ukuze liqhubeke futhi lizobonisa kuphela imvelo yabo yangempela ngendlela engcolile.
E-NAZI eJalimane kwakukhona nabantu abangazange baziphathe ngendlela efanele ngayo kulezi zintathu. Laba bantu benziwa ukuphila kungenakwenzeka. Isikhathi esiphila kuso manje singafaniswa ngasekupheleni kuka-1930 kuNAZI eJalimane. Wonke umuntu uyazi ukuthi kwenzekani eJalimane nakulo lonke elaseYurophu. Abantu abaningi abafuni ukubona ukuthi siphinde siphila esikhathini esinjalo. Abantu abagcina uhlelo bawu "abahambayo" abanesimo sengqondo esihle "abaziphatha" ngendlela efanele ". Uma nje lesi silungiselelo sihlala singamandla okushayela abantu, i-New World Order izoba yiqiniso.
Izinwele eziya kuMartin ... inhlanzi ephilayo efuna ukuba yedwa!
14 Juni 2019 ku-16: 49
Futhi uma kuziwa ekuculeni, ukushisa okukhulu akusizi ngempela, kodwa angifuni ukuchitha amahora ngikufeza.
Ubani owaziyo, mhlawumbe ngizokwenza lokho kamuva.
Noma kunjalo, ngithanda ukugxila ekubhaleni izihloko ezicacile.
Siyabonga ngempendulo enhle!
« Ukubhujiswa okulawulwayo kwe-brand 'rechts', i-Trump, i-Brexit (nayo yonke into exhunywe kuyo) iqalile
Uma iziprofetho zigcwaliseka, yilokho bufakazi bokuthi izinkolelo zakho ziyiqiniso? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 16.044.119
Intsha yanamuhla ifuna ukugcwalisa amakamu wokufunda kabusha (ama-gulags) ngabaphikisi bezulu
I-coronavirus evela eChina ihlinzeka nge-alibi ephelele yesibopho sokugoma emhlabeni jikelele
Ben op Igciwane le-corona ('i-Wuhan virus') line-patent yesiNgisi: inombolo EP3172319B1
I-Riffian op Igciwane le-corona ('i-Wuhan virus') line-patent yesiNgisi: inombolo EP3172319B1
UMartin Vrijland op Igciwane le-corona ('i-Wuhan virus') line-patent yesiNgisi: inombolo EP3172319B1
SandinG op Igciwane le-corona ('i-Wuhan virus') line-patent yesiNgisi: inombolo EP3172319B1